zonyaka Ukushintsha, amaqembu eminyaka ezilandelana, wanezela kubo ukuze uzizamele izinwele umbala izingubo ... Futhi ngasinye salezi zici inomthelela inqubo isisekelo lokukhetha umuntu. Isesha bese ukhetha shades efiselekayo, ukuhlola izimonyo brand ezahlukene kanye brand, abaningi babhekana nezindleko, isikhathi esichithekayo kanye "okhathele" zale ndlela yokwelapha isikhumba. "Max Factor Color Nezimo" - isisekelo, ukubuyekezwa, ezithemba ukufinyelela kuso onesixazululo sazo zonke izinkinga ngenhla.
Le nkampani "Max Factor" esanda ahlinzekwa amakhasimende ayo umkhiqizo omusha futhi ehlukile ukwakheka, okuyilona elisebenzayo futhi ebizelwa ukuba banakekele isimo kwesikhumba futhi ifomu zayo yobuhle. Ithoni Cream "Umbala Nezimo" kuyinto ezintsha US ukuthuthukiswa cosmetologists. Ngo oyiyo iqukethe izinhlayiya ukuthi bayakwazi ukuzivumelanisa zemvelo ibala lesikhumba, bakubheka futhi belenza ithoni enhle yokuvumelana.
Uma kuqhathaniswa nezinye izinto eziyisisekelo, luhlobo kubikwe njengobugebengu kane esiphumelela nakakhulu lapho ngenxa yokucwaninga konke okufanayo brand cosmetologists. "Max Factor Color Nezimo" - isisekelo, ukubuyekezwa okukuvumela ukuba bafinyelele iziphetho mayelana nekghono waso nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa. Uma uneminye ukuphawula kanye nabasebenzisi e ukusetshenziswa kwezimali, eqinisweni, akekho kubo ubiza ku umbuzo ikhono lakhe Matting.
Okufakiwe futhi ibhodlela design
Okusebenzayo minimalist ixhumeke ikhambi elilodwa. I isitsha has a design elula sleek. Kuyinto elula ukuba Esandleni sakho, kodwa elikhulu ngokwanele ukuba lithwalwe esikhwameni usuku noma ukuthatha nawe ku uhambo. Bottle ifakwe futha nge ekhaleni mncane. It ikuvumela ukuba ukubuyisa nje isilinganiso esifanele umkhiqizo isicelo. Umthamo - 34 ml.
I isitsha Ubuye isivalo, itjhubhu nokugcina nabo izinto ezihlanzekile. "Max Factor Color Nezimo" - sisekelo uthola wokubuyekezwa okuvumelekile. Ikakhulukazi abesifazane ukudumisa pompochku elula, zifakwa ku esitsheni, okusho njengoba ukusetshenziswa liyaphuma, ngaleyo ndlela kunomthelela ukusebenza kwawo ngempumelelo.
Ukwakheka kanye ukuthungwa
Ifomula has a ukungaguquguquki ketshezi, nombala isicelo futhi basakaza on the isikhumba. Indlela elula kunazo ukusebenza ithuluzi ibhulashi noma iminwe. I kahle kuqala futhi ngokulinganayo ukusabalalisa ukhilimu engashiyanga streaks. Ngaphansi isenzo iminwe kuyoba 'sincibilikise', ngomusa diverging yaba izingxenye. Ngemva isicelo touch ithoni ukukhanya, Velvety, impuphu. Yena neze wazizwa hhayi "ngoyisiwula kusinda" ubuso.
imicabango yabantu Abaningi basho amazwi mayelana lesisekelo 'Max Factor Color Nezimo 3in1 ", ukubuyekezwa umthengi ukugcizelela ukuthi ithuluzi kungaqali ezomile futhi akusho clog pores, ngaleyo ndlela-ke unikeza isikhumba kukhanya okunempilo. Lokhu kufezwa sibonga micropigments nezinhlayiyana lembhali. Baqamekele amaphutha amancane, ububomvu, nezinduna. Elastomers, enikeza isikhumba a Velvety. Njengengxenye amafutha. Ngakho-ke, umkhiqizo kufanelekile isikhumba ebucayi. Ukhilimu kwaba ukulawula dermatological.
Umugqa imelelwa anemibala eziyisithupha ibanga sasivumela ububanzi, okukuvumela eyolanda ezahlukene izindlela abathengi. Kumalula - "Porcelain" kanye emnyama - "wemvelo". Ngaphezu kwalokho, umthamo oluhambelana we uketshezi kuzodala umbala ephelele, ngisho noma ngabe thuluzi kancane ihlukile kweyakho. Shades ibe digital elandelayo wokugubha:
Golden - 75.
Zemvelo - 70.
beige Red - 55.
Zobumba - 50.
alimondi Warm - 45.
Ivory - 40.
Izimakethe European futhi American, kukhona ithoni 80th - Bronze. Ngemuva kokufaka isicelo ifomula umbala kuqondaniswe imizuzu 10-15. Ithoni Cream "Max Factor Color Nezimo", ukubuyekezwa kanye shades anikeza ithemba ukukhetha ekahle kusho nsuku zonke kungaba kukho olukhulu off-inkathi nezinguquko yakhe okungazelelwe lokushisa. Umoya abandayo manje uyonika kukhanya, hhayi namachashaza izihlathi.
Indlela ukukhetha concealer "Max Factor Color Nezimo?"
Izibuyekezo ihlolwe abathengi uketshezi unike amandla iziphetho ezilandelayo. Lapho ekhetha kubaluleke kakhulu ukuba acabangele izici ezilandelayo: Season, uhlobo isikhumba, ubudala, ukuthungwa, umbala. Lesi sisekelo uvezwa ukungaguquguquki uketshezi. Ngakho-ke, njengoba sekuphawuliwe kakade, it is kahle zokuhamba ehlobo futhi off-inkathi. Ukuze ebusika kungcono ukukhetha ukuthungwa ayazika, noma ukuhlanganisa it esifanele isisekelo kwesizini.
Plus ukuthungwa uketshezi futhi itholakala lokuthi ukuthi uvuma kahle ezahlukene isikhumba. Ukhilimu akusho clog pores futhi akusho ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu nokuvuvukala. Umkhiqizo akusho zome isikhumba esomile, ngaphezu kwalokho, enakekela wakhe emini. Ithoni Cream Kunconywa abaneminyaka engu-18 nangaphezulu. Ukuze ukhethe umthunzi eduze ngangokunokwenzeka, eqondiswa umbala kwesikhumba umugqa emhlathini. Le ndawo inikeza isithombe ephelele kunayo nokhetho olufunekayo. Kahle ithoni akhethiwe "kuyoncibilikisa futhi zinyamalale" esikhumbeni ngaphandle kokushiya yimuphi imigqa inguquko.
Indlela yokufaka isicelo "Umbala Nezimo?"
Imiyalelo ku-ejenti Kunconywa ukusebenzisa inani elincane uketshezi ngaphandle entendeni eduze isithupha ukuthi "sekuqala ukufudumala." Khona-ke nge isakhiwo ibhulashi uhlobo owodwa, bese ezinhlangothini zalo yesibili futhi wenze ukukhanya imivimbo maphakathi ubuso. Sabalalisa nge uhamba ezithambile ngase wabuka saso.
Uma kudingekile, faka i-concealer phezu izindebe noma uwanike ukozela amehlo, uyisebenzisa njengendlela base ngoba lipstick noma isithunzi. Ngakho ngeke ukusakaza futhi ahlale imigqa ecolekile. Ukubuyekezwa kuqashelwe ukuthi ithuluzi akusho imaski semfene abalulekile noma lesikhumba liphinyiselwe kwesikhumba, ngakho ezimweni ezinjalo, sebenzisa umqondisi ezengeziwe. Kushisa, kutuswa ukuba silungise kokuthona ukhilimu powder.
Imibono yabasebenzisi ukuzama ithuluzi esikhumbeni futhi indlela yabo, ikakhulukazi omuhle. "Umbala ingashintshwa" ethandwa kakhulu ngenxa izinga kanye nempumelelo umthelela. Wathatha ngempela ukuhlolwa eside futhi wathola izilinganiso okusezingeni eliphezulu. Izimfanelo abasebenzisi bangakwazi ukuhlangabezana izincazelo ezilandelayo: umdlalo imibala, isikhumba sakhe esithambile futhi abushelelezi, yemvelo, impuphu ukuthungwa, umbala ephelele.
Ithoni Cream "Max Factor Color Nezimo 'ukubuyekezwa nezilinganiso ukuthi ezinokwethenjelwa futhi abangele nesithakazelo esiqotho ezingasho amakhasimende amasha, it has bokwenza eziningana ekusebenziseni, kanye nanoma iyiphi idivayisi yakhelwe anhlobonhlobo abathengi. Cabanga ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo ngokuningiliziwe.
Inzuzo ezibaluleke kakhulu futhi okuphawulekayo nekhono ukuzivumelanisa ithoni isisekelo isikhumba. Anakho banomuzwa emnandi, okwenza kube ethambile, Velvety. Kusho ukhilimu ketshezi has a ukuthungwa isicelo kahle futhi ngokulinganayo basakaza iminwe noma shayela. Ikhasimende babethi wayegqugquzela abashiyanga streaks, it is ngokushesha wakwamukela futhi akusho imaski umphumela. ibhodlela Kalula nge itjhubhu mncane ikuvumela ukuyisebenzisa njengoba kahle.
Ejabulisa abesifazane ezihlukahlukene ocebile shades ngendlela ebanzi umbala ububanzi. Uyosinika ithuba eyolanda ithoni ephelele, okuyilona elisebenzayo futhi eminye kwaguqulwa. Ithuluzi ingasetshenziswa njengendlela base emthunzini noma lipstick. "Max Factor Color Nezimo" (isisekelo) has wokubuyekezwa okuvumelekile. Girls athi choice ephelele nsuku zonke. Ithuluzi ubuye efanelekayo kusihlwa futhi zemikhosi ukwakheka, kodwa nokusetshenziswa ezingeziwe ubhuqu proofreader.
Ukwahlulela nge izibuyekezo ukhilimu amaphutha yilezi ezilandelayo umehluko wemisindo nemiqondo yamagama:
Ukumelana Kubi uma isetshenziswa isikhumba oily (amahora angu-2).
Izikolo lakhulisiwe ikhule ezimbotsheni, ngakho uma izici ezifana kungcono ukuthatha pre-umhloli.
opacity okuphansi. Uma ukukhubazeka ezinkulu kumele futhi usebenzise isizinda kanye concealer.
Uma une isikhumba esomile, kunalokho, yona igcizelela zonke uyaxebuka. Ngakho-ke Kunconywa ukuba sisebenzise ukhilimu amafutha.
Inani Futhi nabesifazane abathile babonakala overpriced. Nokho, kuyinto ejwayelekile iningi izimali ye-brand.
Ithoni Cream "Max Factor Color Nezimo", izithombe kanye nokubuyekeza zazo okusesihlokweni esithi, kuba izinsiza ephelele incazelo yamagama ngokushintshashintsha iphimbo, kuncike isicelo ubuchwepheshe kanye umthunzi kukhethwe kahle. Abanikazi isikhumba oily futhi yomile kuzodinga ukunakekela okungeziwe ukufeza enamathela ekahle, yize impahla nezimo.
Nasibuka emashalofini nezitolo ezinkulu, ezimweni ezilingayo ngokushintshashintsha emakhasini omagazini kusesho ithoni ephelele kusho ukuthi ungakwazi ukuxazulula zonke izinkinga ngesikhathi esisodwa, banake "Umbala Nezimo." Kungase kutholakale umkhiqizo idumela nezilinganiso eliphezulu uketshezi, langa isikhumba ithoni ikhono ukuze lizuze okungenani usihlole.
Cabanga ngawo wonke amaqiniso ukuthonya choice of izindlela nezimo ezingezinhle kungenzeka, lezi ezinye abasebenzisi, ngaphambi kokwenza isinqumo sokugcina. Ithoni Cream "Max Factor Color Nezimo" (izimpendulo ziholela iziphetho ezinjalo) kuyoba ngaphezu kakhulu kunoma yezimonyo, lula kakhulu ukunakekelwa nsuku zonke futhi ngcono induduzo nokusebenzisa izimonyo.
Balms Lip "Belvedere": Izibuyekezo
Iphunga ngoba amadoda angempela - "Versace Thela Homme"
Abaningi bakhathazeka ngalolu daba: "ngibukeka ingane ukuthi yini okufanele uyenze.?"
UHenry Clarke Dental Clinic: ukubuyekezwa, incazelo, ochwepheshe, oxhumana nabo kanye nezibuyekezo
Yini wenze ugogo samanje ngezandla
Ukuthuthukisa uhlelo ukuqeqeshwa "Isotone" Seluyanova
Indlela esiphatha ngayo umdlavuza emphinjeni kwa-Israyeli
Oshiselelayo isitifiketi uhlelo NAKS